Muhiimada xariirka caruurta & waaridka part-2 – Bogga sheekooyinka
Muhiimada xariirka caruurta & waaridka part-2
Waalid kasta waxa uu jecel yahay in ilmihiisu marka uu waynaado ama qaan gaaro noqdo mid edab iyo akhlaaq leh, isla markaana u hana qaada sidii uu niyada ku hayey muddadii koritaankiisa uu ku guda jiray.
Sidaa darteed horta ma is waydiisay intii uu yaraa ilmahu, xiriir noocee ah ayaa idinka dhexeeyay? Culimada aduunka ee ku xeel dheer arimaha bulshada ayaa sheega in waalidiinta dhamaantood ay u qaybsamaan saddex nooc iyagoo waliba raaciyey nooc walba oo ka mid ah saddexdan ilmaha uu koriyaa siduu noqonayo mustaqbalka, maxaayeelay koritaanka ilmahu waa aasaaska mustaqbalka.
Waalid askari ah (ad’adag ).
Waa waalid aaminsan in ilmaha ciqaab iyo gacan adag oo lagu qabto mooyaane, aanu si kale u hagaagayn. Had iyo jeer kama dhagaysto ilmaha yar-yar fikradahooda ama cabashooyinkooda, waxaanu ku fuliyaa amaro kala duwan sida waxaa qabo iyo waxaa ha samayn. Waalidkan ilamaha ma arko wanaagiisa, iska daa inuu kula dhaqmee, ilamahiisa ma dareensiin karo jacaylka waalidnimo ee uu hayo. Caruurtiisa kuma amaano waxyaabaha wanaagsan ee ay sameeyaan, taasoo kalsoonidooda dhimaysa. Ilamaha uu koriyo waalidkan naxiirsta daran ama uu dhalay waxa uu mar walba tirsadaa cadaalad daro.
Sababta oo ah marka wax loo sheegayo wax lama waydiin jirin ee awood ayaa lagu hayey, lamana siin karaaamadii uu xaqa u lahaa waayo Illaahay ayaa ku sheegay qur’aanka.Ilamaha yarina dadkaa ayuu ka mid yahay. Sidaa awgeed ilmahaasi marka uu waynaado waxa uu noqdaa qof adag oo naxariistu ku yartahay, waxaanu galaya aarsi isagoo moodaya inuu qof kasta oo xoog lehi inuu cadaadiyo kuwa ka tabarta daran.
Waxa kale oo ilamahani noqon karaa marka uu waynaado mid hayalsan, hiin-raaccid kasta hadalkeeda maqla, sababtuna waa isaga oon markuu yaraa maskaxdiisa aan laga shaqaysiin, moodayana in uu waligii amar qof daba socon doono.
Ta kale ee ilamahan ka dhaxlo odaygii waalidkii, waa isagoo noqda beenaale, sababtuna tahay mar kasta cabsi darteed ayuu waalidkiisa been u sheegi jiray. Caruurta waalidkan la kulantaa inta badan waxay noqdaan kuwo si fudud u barta maandooriyaasha ay xabagtu ka mid tahay. Tusaale, isagoo baqaaya isla markaana fikir badani ka hayo xogta waalidkiisa ayuu la kulmayaa maandooriyaha, waanu ku nafisayaa. Sidaasna ku noqonayaa ku bartay.
Waalid iska daawada wax kasta oo ilmihiisu falayo (daawade).
Waa waalid aan ilmihiisa kala barin waxa uu xaq u leeyahay iyo waxa isaga xaq loogu leeyahay. Ilamahani marka uu waynaado waxa uu noqdaa mid badanaa aanay dadka ku xeeran is fahmin, waayo waxa uu moodaya inuu isagu wax kasta xaq u leeyahay. Soomalidu waxay noocan oo kale ugu yeertaa garmaqaate. Hadii uu xaas yeesho waxa uu mooda inay tahay wax uu isagu iska leeyahay siduu doonana ka yeeli karo. Ilmahani waxa uu la koraa jahawareerkii ku dhacay markuu yaraa ee aan waxba loo sheegin ama aanu la kulmin waalid fahansiiya qaabka nolosha.
Waalid macalin ah.
Waalidkani waa waalid aaminsan nolosha waaqiceeda, sidaa oo ay tahayna ilmihiisa waxa uu ku koriyaan edab suuban, naxariis iyo jacayl. Ilmihiisana waxa uu u noqdaa saaxiib dhab ah oo wax walba kala sheekaysta. Waa waalid ilmihiisa siiya karaamadii uu qof ahaan lahaa.Waxa uu kala baraa wadooyinka saxda ah iyo kuwa khaldan, isagoo u jeexa dariiqa hagi doona mustaqbalka noloshiisa.
Waxa uu macalin uga noqdaa siduu uu runta u sheegi lahaa, isagoo u tilmaamaya in haduu runta u sheego wax walba ka cafinayo. Ilmaha yari wuu kula so dhiiranaya wax kasta oo maskaxdiisa ka dhex guuxaya. Ilmaha uu waalidkani koriyaa mustaqbalkiisa waxa uu noqdaa mid nolosha ku qanacsan oo ka nabad galay aafooyin badan oo qayrkii ku dhaceen.Waxa uu noqdaa mid caqligiisu dhamays tiran yahay oo hagi kara nolosha iyo duruufaha aduun ee hadba ku xeeran.
Hadaba waalidow ma tahay mid fahansan in ilmahu noqon doono hadba waxa aad ku korinayso? Mise waxaad rabtaa adiga oo aan waxba barin inuu heshid wiil fiican ama gabar wanaagsan. Walidiinta dhamaantood waxa looga baahan yahay inaanay korinta caruuta moodin cunto la siiyo iyo dhar loo xiro balse ay ka fikiraan xiriirka ka dhaxeeya qaabka ay ula dhaqmaan iyo mustaqbalkooda.